Ahoana ny fametrahana MyWebSQL amin'ny Ubuntu 16.04
Ao amin'ity lesona ity dia hampiseho aminao ny fomba fametrahana MyWebSQL amin'ny server Ubuntu 16.04. Ny MyWebSQL dia loharanom-pifandraisana maimaim-poana sy mivelatra amin'ny WYSIWYG izay ahafahana mampiasa ny tahiry eo amin'ny servero. Izy io dia manome interface tsotra sy mahaliana miaraka amin'ny fijery sy ...
Mamoròna mpampiasa MySQL vaovao sy Fahazoan-dàlana Grant amin'ny MySQL Database
Ao amin'ity lesona ity dia hanazava ny fomba hamoronana mpampiasa vaovao sy hanomezan-dàlana ny mpampiasa ao MySQL. Ny MySQL dia rafi-pitantanana mifandraika amin'ny rafitra database (RDBMS) izay ahafahan'ny mpampiasa sy ny fampiharana manangona, mandamina ary mamerina ny angon-dry zareo. Misy ...
Install phpMyAdmin amin'ny Ubuntu 16.04
Ny phpMyAdmin dia iray amin'ireo fitaovana fitantanana tranonkala mifototra amin'ny tranokala malaza sy be mpampiasa indrindra. Izy io dia loharanom-pahalalana PHP iray malalaka sy open source izay ahafahan'ny mpampiasa misafidy server na mpanolotra solo tokana na eo an-toerana na amin'ny serivisy alefa amin'ny alalan'ny navigateur web (GUI). ...
Ahoana ny fametrahana sy ny fanaraha-maso Nextcloud amin'ny Ubuntu 16.04 amin'ny Apache
Nextcloud dia servisy fitahirizana rahona noforonin'ny mpanangana ny ownCloud. Tsy toy ireo tolotra malaza hafa, amin'ity tranga ity, dia afaka manangana ny rafi-pandraketanao manokana ianao, ao amin'ny serveranao. Nextcloud dia manome anao ny fanaraha-maso tsara amin'ny alàlan'ny data, manamora ny fampitaovana ny rakitra ary ahafahana mizara amin'ny fitaovana. ...
Ahoana ny hamerenana ny tenimiafinao WordPress Admin
WordPress dia tranonkala fitantanana malalaka sy open source (CMS) mifototra amin'ny PHP sy MySQL izay azonao ampiasaina mba hamoronana tranokala tsara tarehy. Hatramin'ny April 2016, WordPress dia ampiasain'ny 26.4% amin'ny tranokalan'ny 10 ambony miely eran-tany. Indraindray webmaster webmasters ...
Ahoana ny fametrahana ny MySQL Cluster amin'ny Ubuntu
Ny MySQL NDB Cluster dia mampifandray ny serfa MySQL serial-tsambo miaraka amin'ny motera fitahiranan-tsokajy maimaim-poana antsoina hoe NDB (Network DataBase). Amin'ity lesona ity dia hampiseho aminao ny fomba fametrahana MySQL Cluster amin'ny Ubuntu 16.04 VPS. Ampiasainay ny servisy virtual 4, ...
Manaova fikojakojana ny MySQL Databases miaraka amin'i Percona XtraBackup amin'ny Ubuntu 16.04
Ataovy ny famandrihana malalaka amin'ny MySQL Databases miaraka amin'i Percona XtraBackup ao amin'ny Ubuntu 16.04 Percona XtraBackup dia loharano ho an'ny backup ho an'ny MySQL. Manohana ny tsiron'ny MySQL rehetra tahaka ny Percona Server, MariaDB, ary (Oracle) MySQL. Percona Xtrabackup dia manamboatra Hot Backup ho MySQL. Hot Backup dia midika ho ...
Hametraka XWiki amin'ny Ubuntu 16.04 VPS
Ny XWiki dia tranonkala malalaka sy malalaka ampiasaina ao amin'ny rindrambaiko wiki amin'ny Java. Mihazakazaka ao amin'ny servlet toy ny JBoss, Tomcat sns ... izay mampiasa tahiry iray toy ny MySQL na PostgreSQL mba hitahiry ny mombamomba azy. Misy fomba maro fananganana XWiki. Ao amin'ity lesona ity, ...
Ahoana ny fametrahana sy ny fampiharana ny MongoDB amin'ny Ubuntu 16.04
Ahoana ny fametrahana sy ny fampiharana ny MongoDB amin'ny Ubuntu 16.04 MongoDB dia tahiry NoSQL izay manome ny fahombiazan'ny fampiroboroboana avo lenta, ary ny tahiry fandraisam-peo ho an'ny orinasa. MongoDB dia tahiry NoSQL, noho izany dia tsy afaka mampiasa ny SQL (Structured Query Language) ianao mba hampidirana sy haka ireo angona, ary izany dia ...
Hampiditra ny Cockpit CMS amin'ny Ubuntu 16.04
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehoy anao ny fomba fametrahana Cockpit CMS amin'ny Ubuntu 16.04 VPS miaraka amin'ny PHP-FPM 7.0 sy Nginx. Cockpit dia loharanom-pifandraisana mivantana (API) natokana ho an'ny rafitra fanaraha-mason'ny API (CMS) voasoratra ao amin'ny PHP. Cockpit manangona ny angona ao anaty tahiry SQLite ka ...
Ahoana ny fametrahana replication MySQL amin'ny CentOS
Ao amin'ity lesona ity dia hampiseho aminao ny fomba fametrahana fototra ny MySQL fototra amin'ny servos CentOS 7 roa, fa ireo dingana mitovy dia tokony hiasa amin'ny rafitra rehetra mifototra amin'ny RPM. Hampiasa serveur virtuel virtuel CentOS 7 servers ho an'ity lesona ity miaraka amin'ireo adiresy IP manaraka ireto izahay:
Ahoana no hametrahana rindrambaiko varotra WeBid amin'ny CentOS
Ao amin'ity lesona ity dia hasehontsika anao ny fomba fametrahana WeBid amin'ny CentOS 7 VPS miaraka amin'ny Apache, PHP sy MySQL napetraka eo aminy. WeBid dia rindrambaiko mivantana loharanon-drakitra voasoratra ao amin'ny PHP. Izany no vahaolana tsara indrindra hananganana tranokalan'ny tranokala. Ity lesona ity ...
Ampiasao ny configure Nginx amin'ny php-fpm ary iray amin'ny tahiry MySQL, PostgreSQL
Ity lahatsoratra ity dia hanampy antsika rehetra hanamboatra automatique, hampifanaraka ny Nginx amin'ny PHP-FPM, mametraka ny virtoaly virtoaly ary hamela antsika hisafidy iray amin'ny tahiry MySQL na PostgreSQL. Manana mpizara roa izahay. CentOS7 sy FreeBSD10. Fitehirizam-boky GIT ho an'ny code. Raha te haka ireo kodiarana amin'ny GIT repository ianao ...
Fametrahana sy fampiendrehana ny Cluster MySQL ao Linux
Fanamarihana: Ity lahatsoratra ity dia navoakan'ny 'Open Source for You Magazine' - Martsa 2016 Edition. Rehefa nanangana mpandrindra DHCP aho dia mikasa ny hampiasa sehatr'asa DNS ao amin'ny tambanjotra. Safidy tsara foana ny manana DNS sy DHCP amin'ny ...
Ahoana ny fametrahana Nginx, PHP sy MySQL (LEMP Stack) ao amin'ny OpenSUSE Leap 42.1
Ny fomba fametrahana ny Nginx, PHP sy MySQL (LEMP Stack) amin'ny OpenSUSE Leap 42.1 LEMP na Linux, Engine-x, MySQL, ary PHP dia rakitra rindrambaiko napetraka ao amin'ny rafitra fiasan-drakitra Linux mba ahafahana mampiasa ny PHP-tranonkala mifototra amin'ny Internet ny tranokala Nginx fast ...
Ahoana ny fametrahana ny fametrahana ny MySQL Master-Master Replication
Ahoana ny fametrahana ny fametrahana MySQL Master-Master Replication Ity lahatsoratra ity dia manamafy ny fampahalalana avy amin'ny loharano marobe amin'ny format ampiasaiko hananganana MySQL Master / Master Replication. Ny hakanton'ny Linux sy ny loharano misokatra dia misy fomba maro samihafa hanaovana izany. Miangavy anao aho hijery ...
Mametraka WordPress amin'ny Nginx amin'ny openSUSE
Araka ny efa fantatrao dia WordPress dia tranonkala fitantanana maimaim-poana sy open source (CMS) mifototra amin'ny PHP sy MySQL izay azonao ampiasaina mba hamoronana tranokala tsara tarehy, bilaogy, na app. Amin'ity lahatsoratra ity dia hametraka WordPress amin'ny Nginx amin'ny openSUSE VPS. Araho àry ny ...
Ny fomba fametrahana WikkaWiki amin'ny Ubuntu VPS
Anatin'ity lesona ity dia hasehontsika anao ny fomba fametrahana WikkaWiki amin'ny Ubuntu 14.04 VPS. WikkaWiki dia rindrambaiko matihanina maimaim-poana sy maimaim-poana amin'ny alàlan'ny PHP, izay mampiasa rakitra MySQL ho an'ny tahiry. Mora ny manangana sy mora ...
Ahoana no hampisehoana ny mpampiasa rehetra amin'ny MySQL
Io no fanontaniana iraisan'ny ankamaroan'ny mpisera MySQL. Tsikaritsika ao amin'ny aterineto sy ao amin'ny bilaoginay ihany koa izany. Matetika izy no mangataka satria misy baiko MySQL hafa miseho amin'ny fampisehoana vaovao momba ny daty, ohatra: SHOW DATABASES dia hamoaka ny lisitra rehetra.
1 2 3 4 ... 15 Manaraka
HTTPS fitaovana File CentOS Microsoft fanamarinana Unité centrale SSH Database WordPress Users iPhone Support Ubuntu (rafitra fandidiana) ubuntu 15.04 bilaogy Samsung Galaxy famotsorana bilaogy YouTube PPA Windows Phone Linux Mint Apple Watch Command 04 Android web server rafitra windows update Time PHP Ubuntu takelaka fikirakirana fitaovana USB haino aman-jery sosialy Samsung OS X Bing web browser API finday avo lenta MySQL Twitter 10 Nginx Facebook 'App MAMAKA taona HTML fitaovana finday Video Screen SEO vaovao farany Microsoft Windows One ' fifamoivoizana app store HTTP Ubuntu 14.04 Toetoetra nbsp CentOS 7 Ubuntu 14.10 paoma "PC Chrome IP adiresy Windows Unix lalao Plugins Server Windows 8 SSD Cortana lalao fitaovana loharano misokatra Ubuntu 16 Company Phone Google Linux Ubuntu Systems PDG Up " fikarohana afa-po Apps famerenana Linux toe-tsaina ram Debian GNOME hametraka Fitaovana finday Malagasy Bible Rafitra fikirakirana tahirin-kevitra Apache endri-javatra raki-daza command line Plugin rindrambaiko Windows 10 Firefox